Inkosana eyOnwabileyo ka-Oscar Wilde (isiXhosa) – Bridge Books add wishlist show wishlist remove wishlist add compare show compare remove compare preloader
Inkosana eyOnwabileyo ka-Oscar Wilde (isiXhosa)
Inkosana eyOnwabileyo ka-Oscar Wilde (isiXhosa) Booksite Afrika
Phezu kwesiqobo sawo eside esivelele isixeko, umfanekiso oqingqiweyo ogolide weNkosana eyOnwabileyo ubona ububi nenkxwaleko yabantu esixekweni esingezantsi kwawo. Ubongoza iNkonjane encinane ukuba isuse bonke ubucwebecwebe obukuyo ize yabelane ngabo nabantu abangamahlwempu. Ngelixa iNkosana eyOnwabileyo icela umhlobo wayo omtsha ukuba ahlale ze ayincede, iNkonjane ifunda isifundo ngokubonisa uvelwano nokukhathalela abanye. Ibali elingaphelelwayo, elisenentsingiselo nanamhla oku nelibonisa uvelwano nenkathalo phakathi kweNkosana eyOnwabileyo neNkonjane lenziwe ukuba linike umdla ngakumbi yimizobo emangalisayo ezotywe ngenkathalo nguJoan Rankin. Ibali elisathandwa nanamhla oku elapapashwa okokuqala ngowe-1888, liza konwatyelwa ngabadala kunye nabantwana. Format Paperback Pages 26 ISBN 9781431405282